Shina Fanaraha-maso Pole mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Home > Products > Light Pole > Fanaraha-maso Pole
Ny bara fanaraha-maso dia tsangambato tsanganana ho an'ny fametrahana fakantsary fanaraha-maso ivelany. Ny fanaraha-maso amin'ny làlana dia matetika amin'ny alàlan'ny 6 metatra sy sandry 1 metatra. Tsy misy tranga manokana ho an'ny rehetra ny fanaraha-maso ny kongonina efa napetraka dia ny C25ç ¼, ary ny fantsom-by dia mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly sy iharan'ny rivotra. Ny simenitra simenitra simenitra Portland 425 mahazatra. Ny fetran'ny simenitra sy ny simenitra simenitra kely indrindra dia tokony mahafeno ny fepetra takian'ny GBJ204-83;
Ny barika fanaraha-maso dia tsy maintsy manana fototra marim-pototra. Tsara indrindra ny manampina mitarika mankany amin'ny tany (voalaza fa tsy mandeha amin'ny vatan'ny rod), ny fanoherana amin'ny fototra dia latsaky ny 4 ohms; ny tarika kofehy ambonin`ny flange ny vatofantsika misy vatofantsika mipetaka dia tsara mba hisorohana ny fanimbana ny kofehy. Araka ny sarin'ny fametrahana an'ireo faritra napetraka, ny ampidirina amin'ireo tsato-maso fanaraha-maso dia napetraka tsara mba hahazoana antoka fa ny zoro rindra amin'ny fitaovam-piadiana dia miorka amin'ny làlana mitondra (na araka ny fitakian'ny injeniera), ary ny takela-bato dia ampiasaina ho taolana lehibe; ny fisakan'ny sosona mivaingana amin'ny gorodona fanorenan'ny rod dia latsaky ny 5 mm. / m Manandrama mihazona ny haavon'ny paola. Ny flange embedded dia 20 ~ 30 mm ambany noho ny tany manodidina, ary ny tadiny fanamafisana dia voarakotra menaka rongony C25 mba hisorohana ny fanangonan-drano;
Ny lavadrano famatsian-tanana dia tsy maintsy omena rehefa ny tsato, ny boaty fanaraha-maso, ny tariby tariby, ny halavan-tsoratry ny tariby tariby mihoatra ny 50 metatra, na ny fantsom-tariby amin'ny tendrony roa dia tsy mihoatra ny 100 mm tsy mitovy. Ny takelaka anatiny amin'ny lavaky ny tanana dia takiana ho 500 (halavany) Ã— 500 (sakany) Ã— 600 (lalina) MM, ary ny takelaka dia ampiasaina amin'ny fikorianan'ny rano; ny rindrin'ny lavaky ny tanana dia tsy maintsy voatsindrona amin'ny feta simenitra.
Ny boaty fanaraha-maso dia fitaovana amin'ny mpanamboatra fitaovana araka ny fahaiza-manao takiana. Ny akorandamba dia vita amin'ny vilia vy vita amin'ny hatsiaka avo lenta miaraka amin'ny hatevin'ny rindrina tsy latsaky ny 1.2mm ary atsofoka amin'ny plastika plastika ivelany sy ny rano ary ny anti-halatra. Ny vy matevina dia tsy misy fiantraikany amin'ny akora sy fananana mofomamy, fanalefahana, hoditra mavesatra, famafazana slag, sns. Ny halalin'ny pitting na calle dia tsy hihoatra ny 1/2 amin'ny fandefitra ratsy amin'ny valin'ny vy, ary tsy hihoatra ny 0.5 mm.
Outdoor zaridaina avo kalitao vy Monitor pole
Outdamin'nyny znyridnyinny nyvo knylitnyo vy Mamin'nyitnny pole, tnypered bamin'nygo eny nyn-dnylnynny jiro bnyo diny tsihyetikny nnyndrnykotrny ny tsihy nny tenamin'nyny bnyg, nny mnynnyrnykny mpnynjifny ny fepetrny, The Lamin'nyyding hnyhotsnyhnynny fnny ny 20ft nny 40ft camin'nytnyiner dia ho bnysed amin'ny mpnynjifny ny nyctunyl specificnytiamin'ny nynd dnytny.
Buy Fanaraha-maso Pole nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba Fanaraha-maso Pole ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized Fanaraha-maso Pole Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.